I-Superfish kwii-PC zeLenovo: Yintoni, ichaphazela bani, kwaye uyisusa njani | Iindaba zeGajethi
I-Superfish kwii-PC zeLenovo: Yintoni, ichaphazela bani, kwaye uyisusa njani
UPablo Ortega | | ngokubanzi, isibulali, Iikhompyuter, software
Igama elithi Superfish lisenokungaqheleki kuwe de liqale ukubamba kule veki. Yi-adware eyenzakalise abasebenzisi beLenovo. Inkampani ithengisa uthotho lweekhompyuter ngale adware ehambisa ulwazi lwethu lomntu kuye nawuphi na umkhangeli. Kubalulekile ukwazi yintoni iSuperfish kwaye ichaphazela njani amaqelas ezidibanisa le adware, kuba ukuba unekhompyuter yeLenovo kunye neSuperfish kuyacetyiswa ukuba uyiphelise inkqubo ngokukhawuleza.
Ekuqaleni, bevela eLenovo bathi cwaka kwaye abaphawulanga ngalo mbandela, ngaphandle kwento yokuba kukho iimvavanyo ezininzi ezipapashwe ngabasebenzisi bazo kuyo yonke indawo. Okokugqibela, kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, uninzi lwezithethi zenkampani babuqonda ubukho be-Superfish kumaqela abo kwaye baxolisa ngayo. Iiyure kamva, uLenovo ukhuphe isixhobo esiza kunceda wonke umsebenzisi ukuba alahle iSuperfish ngokukhawuleza. Kwesi sikhokelo siphendula imibuzo ebuzwa rhoqo enxulumene ne-Superfish kwaye sikubonise uyisusa njani i-adware.
1 Yintoni iSuperfish? Ziziphi iingozi zakho?
2 Ngaba uLenovo wenze ingeniso ngeSuppfish?
3 Ngawaphi amaqela achaphazela iSuperfish?
4 Kufuneka ndenze ntoni ukuba ikhompyuter yam ifakwe iSuperfish?
5 Uyisusa njani iSuperfish ngesandla
Yintoni iSuperfish? Ziziphi iingozi zakho?
Siqala eli candelo ngokuqokelela iingxelo zezithethi zeLenovo. Ngokwale mithombo yaseburhulumenteni, “inkampani ifake iSuperfish ukulungiselela abasebenzisi bayo, ukuze bafumane amava okukhangela kunye inqanaba eliphezulu lokwenza ngokwezifiso«. Ukusuka eLenovo baqinisekisile ukuba abayazi yonke ingozi yokhuseleko ebandakanyekayo ekusebenziseni le ntengiso. Iingcali zeLenovo ziye zaqonda kuphela ubungozi beSuperfish bakuba beqalisile ukuyidibanisa ngoLwesine, ngoFebruwari 19. I-Superfish sisicelo esenzelwe ukunceda abasebenzisi ukuba bathenge. Esi sicelo sifake iibhanile kunye namakhonkco kuhambo lokuhamba, into enokuba ingonwabisi kwaphela kubasebenzisi abangaphezulu komnye.
I-Superfish yi i-adware ekwaziyo ukufaka izatifikethi zayo zokhuseleko, ekunceda ukuba udlule kwimigangatho yoqhagamshelo lwewebhu lwe-HTTPS. Indlela le adware efihla ngayo ulwazi ibuthathaka kangangokuba apha endleleni ishiya imingxunya yokhuseleko ivulekile, ibhengeza ulwazi lwethu. Nawuphi na umkhweli unokusebenzisa obu buthathaka ukuba ebe idatha yokufikelela kwi-imeyile yexhoba kwaye baya kuba neengcango ezivulekileyo zokufikelela kwiakhawunti yebhanki. Okwangoku sinokuqinisekisa ukuba ubungozi be-Superfish bungaphezulu kokucacileyo.
Ngenye imini emva kokuvela kwehlazo, i Urhulumente wase-United States ukhuphe ingxelo yezokhuseleko Ukucebisa bonke abasebenzisi beLenovo ukuba basuse i-adware. ISebe lezoKhuseleko lweKhaya lilinganise le software njenge «spyware«.
UPeter Hortensius, CTO waseLenovo, uqinisekisile ukuba "iSuperfish ayisetyenziswanga ukuhlasela ukhuseleko lwabasebenzisi." I-CTO yongeze ngelithi “kubalulekile ukuqonda ukuba ayizizo zonke iinkqubo ezikhoyo eziza kuba ngumdla kuye wonke umntu. Sisebenzise iSuperfish sicinga ukuba inomdla kubantu abathile, kodwa ngokucacileyo asikaze sicinge ukuba iya kuba neziphumo ezingathandekiyo.
Umbuzo olandelayo onengqiqo uza kubuza ukuba ingaba I-Superfish iye yachaphazela abasebenzisi. Okwangoku abukho ubungqina obucacileyo boku. Ingcali kwezokhuseleko ityhile ngolwe-Sihlanu ukuba yintoni enokwenziwa ngokuxhakamfula le mingxunya inkqubo ishiye ingatyhilekanga. Nangona kunjalo, uLenovo khange abe nakho ukuqinisekisa, ubuncinci okwangoku, ukuba ngaba imigewu ibisebenzisa ulwaphulo olo.
Ngaba uLenovo wenze ingeniso ngeSuppfish?
Inkampani iye yagxekwa kakhulu kwiiyure zamva nje zokukhusela isikhundla sayo sokuqala: ukuba esi sicelo besifakelwe inzuzo yabasebenzisi, xa ngenene U-Lenovo uza kuthatha ikhomishini kunqakrazo ngalunye okanye ukuthengwa kwabasebenzisi abachaphazelekayo. Ewe, akukho mmeli wenkampani uye wafuna ukuqinisekisa okanye ukuphika ukuba, ewe, izibonelelo zoqoqosho zifunyenwe ngesixhobo sokuthenga. Endaweni yokunika ulwazi olucacileyo ngayo, inkampani ikhethe ukutshayela ngenye indlela: “Asikaze sinyanzele nawuphi na umsebenzisi ukuba afake iSuperfish. Ngamnye kwafuneka aqinisekise ngofakelo ngokunqakraza kwi Ewe«, UPeter Hortensius wanyanzelisa.
Kuthekani ngabo abasebenzisi abangenamava ngubani owayengazi ncam ukuba yeyantoni iSuperfish okanye umsebenzisi oqhelekileyo onqakraza "Ewe" kuyo yonke into ngaphandle kokufunda izinto kakuhle? Isimo sengqondo sikaLenovo sibonakala sididekile malunga noku kwaye ayenzi izinto zicace.
Ngawaphi amaqela achaphazela iSuperfish?
U-Lenovo waqinisekisa kwasekuqaleni ukuba iSuperfish ayifakwanga kwii-smartphones, iipilisi okanye izixhobo ezithengiswa kwilizwe leshishini. Kwimeko yokugqibela, iziphumo bezinokuba zinkulu ngakumbi, kuba lonke ulwazi oluyimfihlo lweenkampani ezichaphazelekayo belunokuthi luvezwe kukuhlaselwa nangubani na.
Inkampani isungule uluhlu olupheleleyo nolucacileyo apho zonke iifayile ze- iikhompyuter ofake kuyo iSuperfish yelaphu. Nantsi:
Uluhlu lwe-G: G410, G510, G710, G40-70, G50-70, G40-30, G50-30, G40-45, G50-45
Uthotho lweU: U330P, U430P, U330Touch, U430Touch, U530Touch
Y Uthotho: Y430P, Y40-70, Y50-70
Z Uluhlu: Z40-75, Z50-75, Z40-70, Z50-70
S Uthotho: S310, S410, S40-70, S415, S415Touch, S20-30, S20-30Touch
Uthotho lweFlex: Flex2 14D, Flex2 15D, Flex2 14, Flex2 15, Flex2 14 (BTM), Flex2 15 (BTM), Flex 10
Uthotho lwe-MIIX: MIIX2-8, MIIX2-10, MIIX2-11
Uthotho lweYOGA: YOGA2Pro-13, YOGA2-13, YOGA2-11BTM, YOGA2-11HSW
Uthotho lwe-E: E10-30
I-Lenovo isilele ukubonisa ifayile ye elona nani likhompyuter linokuchaphazeleka kwaye kuyabonakala ukuba inkampani ayinazinjongo zokwenza eli nani ukuba libe sesidlangalaleni. Enye indlela yokwazi ukuba ikhompyuter yakho "inesifo" kukusebenzisa olu vavanyo lwenziwe nguFilippo Valsorda, ingcali kwezokhuseleko.
Kufuneka ndenze ntoni ukuba ikhompyuter yam ifakwe iSuperfish?
Ukusuka eLenovo babeke iibhetri kulo mbandela. Ekuqaleni, inkampani yakhupha ingxelo inika imiyalelo malunga uyikhupha njani iSuperfish ngesandla, kodwa wongeze ukuba iqela lakhe leengcali zesoftware sele liphuhlisa isixhobo esiza kuyenza yonke inkqubo ngokuzenzekelayo.
Inkqubo yokususa i-Superfish ngoku iyafumaneka kwaye inokufumaneka kwifayile ye- Lenovo iwebhusayithi esemthethweni. Nje ukuba ukhutshelwe, isixhobo asizukukhathalela kuphela susa i-Superfish, kodwa iyakukhathalela ukuvala yonke imingxunya yokhuseleko eshiye i-adware kwizikhangeli zethu.
Kwenzeka ntoni kwabo bantu bangazi yonke into eyenzekileyo nge-Superfish iveki yonke? I-Lenovo isebenza kunye neMicrosoft kunye neMcAfee ukuze yabo izixhobo zokhuseleko zibhaqa i-adware kwaye uhlukanise. Ngapha koko, iMicrosoft sele ihlaziye iziseko zedatha ukuze ikhathalelwe ibhloko yeSuperfish kwiikhompyutha ezichaphazelekayo. Ke, ingxaki iya kusonjululwa ngokwayo, kuye nawuphina ongakhange abone naluphi na ulwazi ngayo.
Uyisusa njani iSuperfish ngesandla
Ukuba ukhetha ukuzibulala ngokwakho, la manyathelo alula. Into yokuqala esiza kuyenza kukususa inkqubo. Ukwenza oku, siza kuya kukhangelo lokukhetha kwikhompyuter yethu yeWindows kwaye ufake «Susa iiNkqubo», cofa ku «Yongeza okanye ususe iinkqubo». Kuluhlu fumana eli gama: «Superfish Inc. Ukufunyanwa okubonakalayo»Kwaye ucofe ku« Khipha ».
Emva kokukhupha inkqubo, ezinye izatifikethi zakho zisenokugcinwa kwizikhangeli. Kuba susa izatifikethi ezinjalo kwi-Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari naseMaxthon, vula ukhangelo kwaye ufake «iZatifikethi»: cofa ku «Lawula izatifikethi zekhompyuter». Ukuba ufumana umyalezo wokhuseleko lweWindows ukubuza ukuba uyafuna na ukugunyazisa utshintsho, cofa ku "ewe".
Kwiwindow entsha, khangela ifolda ethi "Iziphathamandla eziQinisekisiweyo zeNgcaciso yeNgcambu" nakwindawo eyiyo yewindow khangela I-Superfish. Cofa kwiqhosha lasekunene le mouse kwaye ucime.
ukuba susa izatifikethi kwi-firefox, fikelela kuseto lwesikhangeli, yiya ku Khetha- Phambili. Cofa kwindawo ethi "iZatifikethi" emva koko emva koko "Jonga iZatifikethi". Phantsi kwecandelo "lamagunya", khangela iSuperfish kwaye uzicime ngesandla zonke ezo zatifikethi.
Ikhompyuter yakho iya kuba icocekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » isibulali » I-Superfish kwii-PC zeLenovo: Yintoni, ichaphazela bani, kwaye uyisusa njani
HeadProtect: jonga i-malware kwiWindows
MSConfig: Uyilungisa njani impazamo yokusebenza kwayo kwiWindows